WAAYIHII WARSAME Q24AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q24AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q24AAD
Ammin barqo ah ayuu Warsame iska xaadiriyay garoonka diyaaraha Gaalkacyo. Gaboobe ayaa baabuurkiisa ku qaaday oo garoonka geeyaay.
Waa miley kaliil ah oo aad u kulul, dabayl hanfi kulul wadata ayaa dhacaysa. Dhimicda qorraxda ee dhagaxa xaranka ah ku dhacaysa marka aad meel fog ka aragtid waxaad u qaadanaysaa balli xaareedi waran tahay. Goorsheegtadu kow iyo tobankii subaxnimo wali ma gaarin balse waxa aad u mooddaa labadii duhurnimo kulaylka kaliisha dartiis.
Waa markii ugu horraysay oo Warsame garoonka diyaaradaha yimaado sidoo kale maanta waxa ay noqonaysaa markii ugu horraysay oo uu diyaarad raaaco. Waxyaabaha ugu badan ee Warsame niyaddiisa ku wareegaya waa diyaaradda. Marmmar cabsi ayaa galaysa oo waxa uu leeyahay amay kula dhacdaa iyo balaayo fuushaydu amay hawada sare kugu la luntaa.
Warsame iyo Gaboobe waa ismacsalaameeyeen Warsame na diyaaraddii ayuu gudaha u galay.
Daqiiqado kadib diyaaraddii dhabbaha diyaaradaha ayay ku oradday ilbiriqsiyo kadib na hawada ayay gashay. Dhawr daqiiqadood markii ay kor u sii siqaysaysa ayay halmar hoos dagtay sidii wadaan ceelkii lagu sii daayay si xoog ah ayay hoos ugu hoobatay. Warsame waxa uu dareemay calooshiisi oo bannaanka ku dhacday oo kale kursiga ka horreeyay ayuu cuskaday si xoog ah sidii in uu soo celinayo diyaaradda dhulka ku sii dayaamaysa. Ilbiqirsi kadib haddana waxa uu dareemay in ay xaaladdu caadi ku soo noqotay. Oday kursi u dhow fadhiyay ayaa ku yiri “adeer waxba ha nixin waa caadi, waan ku nabadtagaynaa idin Eebbe. Ma markii kuugu horreysay baa oo aad diyaarad raacdo?” Warsame oo xoogaa yaxyax dareemay ayaa si uu madaxa ciidda uga ceshado yiri “maya adeer hadda ka hor ayaan mar raacay laakiin waqti hore ayay ahayd.”
Qiyaastii afartan daqiiqo kadib Warsame waxa uu dariishadda ka arkay dhul geedo badan oo cagaaran leh, xoolo iyo geel iyo lo’ isugu jira iyo jid laami ah oo baabuur badani yaacayso. Inyar kadib na diyaaraddii cagaha aayay dhulka ku dhufatay.
Waa garoon macmal ah oo lagu magacaabo Lambar Konton. Sida magaca ka muuqata 50km ayuu Muqdisho u jiraa. Asaga iyo dhawr garoon oo kale oo la mid ah ayaa magaalada garoonno dayuuradeed u ah waayo garoonkii caalamiga ahaa ee magaalada ku dhexyaallay toban sannadood ka badan ayuu xiran yahay. Waxa uu u xiran yahay kaliya dagaal-oogayaasha magaaladu u kala xiran tahay ayaan ku heshiin cidda maamulaysa garoonka haddii la furo, marka intii hebel maamuli lahaa ha xirnaado ayaa dagaal-ooge walba la toosnaatay. Saddexda milyan ee magaalada ku noolina yac waa iska oran waayeen. Sidoo kale dekaddii magaalada oo ah tan dalka ugu wayn ah ayaa ayaduna u xiran isla sababta uu garoonku u xirab yahay.
Gaari bas ah ayaa rakaabkii diyaaraddu sidday bartanka garoonka macmalka ah looga soo qaadday. Baskii waxa uu horistaagay dhisme yar oo ay ku yaallaan maqaayad yar iyo dhawr xafiis. Markii uu baskii ka soo degay ayuu indhaha ku dhuftay nin gar wayn oo leh “Warsame, Warsame Faarax,” “waa aniga” ayuu yiri. Horay waxaa Warsame loogu sheegay in qof iskoolka ka socdaa garoonka ugu imaan doono laakiin looma s sheegin nin ama naag qofku nooca uu yahay.
Maashaa Allaah adeer, Ilaahay ma ku nabad keenay? Magacaygu waa Cumar Siyaad ku magacdheer Abuu Lixya.
Abuu Lixya waa maamulaha iskoolka Hoose Dhexe iyo Sare ee Qaryatayn. Waa 48 jir bidaartu madaxa bartankiisa sii marayso gar aad u wayn oo qaybi caddaatay leh. Dalalka Carabta ayuu muddo ku noolaa waxna ku soo bartay. Waxa uu soo bartay culuumta Islaamka iyo luqada Carabiga. Dhawr iyo tobankii sannadood ee u dambaysay waxa uu ku noolaa Soomaaliya inta badanna Muqdisho. Waxa uu ka soo shaqeeyay hay’ada samafalka ee dalalka Carabta laga taageero, sharikado xaawaaladeed iyo goobo waxbarasho. Saddex sannadood ka hor ayaa maamule looga dhigay iskoolka Qaryatayn oo uu labo sannadood oo ka sii horraysayna macallin iyo caawiye maamule ka ahaa. Qaryatayn iyo iskoollo badan oo kale waxaa maamusha hay’ad kuwa Carabtu biisho ah. Abuu Lixya waa afar xaasle xaas kasta deggan tahay guri uu asagu dhistay sanooyinkii la soo dhaafay. Sidoo kale saami ayuu ku leeyahay dhawr sharikadood oo kuwa xawaaladuhu ka mid yihiin.
Abuu Lixya iyo Warsame waxa ay fariisteen labo kursi oo geeska bidix ee maqaayadda yaal. Qado waqtigeedi ka soo hormartay quraacna aan ahayn oo isugu jirta hilib dhaylo shiilan ah, bariis iyo caano geel ayaa loo keenay. Warsame inta uu jug isku siiyay qadadii ayuu hoos ka yiri waligeey hilib kan ka macaan ma cunin. Qado kadib Abuu Lixya waxa uu Warsame u horkacay gaari Toyota qooqan (Hilux) ah oo meel gees ah taagan 4 wiil oo qoryo garraarsanina ay dusha ka saaran yihiin. Abuu Lixya kursiga hore ee rakaabka ayuu fariistay Warsame iyo boorsooyinkiisina kuraasta dambe oo cidlo ah ayay isku weheshadeen.
Darawalkiina furaha inta uu ku rogay baabuurkii ayuu sheelaraha cagta saaray. Warsame marka uu arkay wiilasha hubaysan ee dusha sare saaran iyo Abuu Lixya oo kursiga hore inta uu fariistay taleefan dhagta ku haya waxa uu soo xasuustay Xuseen Lugeey. “Xuseen Lugeey gar leh ayaad gacanta u gashay” ayuu niyadda iska yiri.
Warsame waxaa uu durba dareemay kala duwaanta heer kulkii Gaalkacyo iyo deegaankaan cusub. Waa dhul qabow oo dhir badan oo cagaaran leh. Xattaa dhismayaasha guryuhu waa ka duwan yihiin kuwii Gaalkacyo.
Cabbaar kadib waxaa gaarigii cagta saaray waddo wayn oo laami ah oo baabuur badani yaacayso. Horay u ma arag Warsame laami kan oo kale ah iyo baabuur sidaan u tiro badan. Abuu Lixya mobeel ayuu ku hadlayaa halka Warsame ku fooggan yahay daalacashada hareeraha waddada. Saacad ka bacdi gaarigii waxa uu soo galay dhismayaal badan, waddooyin isdhaafaya iyo dad waddooyinka lugaynaya. Wax uu hadba jiiro galaya baabuurkii waxa uu soo horistaagay dhisme aad u ballaaran oo albaab wayn leh. Wiil qori Ak47 ahi garabka u suran yabay ayaa albaabkii ballaqay gaarigiina gudaha ayuu galay. Dhawr daqiiqadood markii gaarigii si gaabis ah dhismihii ugu dhex socday ayuu horistaagay guryo gaagaab ku yaalla qaybta dambe ee dhismaha.
Abuu Lixya iyo Warsame oo dadaaminaya boorsooyinkii Warsame waxa ay galeen guryihii mid ka mid ah. Waa qol aad u wayn oo ay yaallaan sariiro isku dul rakiban iyo kursi kuwa fadhiga camal ah oo si saf ah u teedsan. Waxaa dhexfadhiya dhawr dhallinyaro ah oo qiyaas ahaan Warsame le’eg iyo nin da’ dhexaad ah. Salaan iyo isxaalwaraysi dabadeed Abuu Lixya waxa uu ninkii baray Warsame, “Warsame ninkaani waa macallin Abuu Haniya saacaddaan laga bilaabo asaga ayaa kaa musuula halkii aad degaysid asaga ayaa masuul ka ah iskoolka qaybta aad dhigaynaysid, masaajidka iyo iyo wixii kale ee tasiilaad ah asaga ayaa ku kala tusaya. Abuu Haniya isla markiiba waxa uu farta ku fiiqay mid ka ah sariiraha isku dul rakiban “sariirtaadu waa taas raqam 17.” Haddana na keen aan yunifoomka ku soo siiyee.
La soco qaybaha dambe haddii Eebbe oggolaado.